Vanhu ava vairatidzira vachiti havaifara nenyaya yekukwidzwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Vamwe vanhu vanonzi vakaurayiwa, mamwe madzimai achipomera mauto mhosva yekuvabata chibharo uye vakawanda vakasungwa. Hurumende iri kuramba kuti izvi zvakaitika ichiti mauto aizorwa mafuta enguruve yaasina kudya.
Vachitaura nebepanhau reSunday Mail munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakati gurukota rezvemitemo VaZiyambi Ziyambi vainge vatenderana nemukuru weUNHRC Amai Michelle Bachelet nezvekutumirwa kwenhumwa kuZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights VaKumbirai Mafunda vati vanotambira rwendo urwu nemaoko maviri.